AQRI SABABTA CIIDAMADA DOWLADA AY UGU SOO BAXEEN FURUMAHA UNA SOO GALEEN MAGAALADDA BAYDHABO
Loading...	Home Wararka AQRI SABABTA CIIDAMADA DOWLADA AY UGU SOO BAXEEN FURUMAHA UNA SOO GALEEN MAGAALADDA BAYDHABO
AQRI SABABTA CIIDAMADA DOWLADA AY UGU SOO BAXEEN FURUMAHA UNA SOO GALEEN MAGAALADDA BAYDHABO	Monday, 18 February 2013 21:47	Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegaya in aan weli xal laga gaarin khilaafka iyo xiisaddii ka dhalatey maamulkii dhawaan loo sameeyey Gobolka Baay iyo xaruntiisa Baydhabo.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay soo baneeyeen furimaha dagaalka ee Gobolka Baay ay ku horfadhiyeen Kooxda al-Shabaab, waxaana ay soo galeen gudaha magaalada baydhabo.
Ciidamadda u qoran dowladda oo horey u sameeyey gadood ay uga ashtakoonayaan, mushahar la’aan ayaa markaan furimaha u soo baneeyey khilaaf u dhexeyaha beelaha wada dega Baay kaas oo ka dhashey maamulkii dhawaan loo sameeyey gobolka Baay.
Maxamed Cabdi Adam Barako ayaa VOA u sheegay in ay ka cabanayaan caddaalad darro, u dhexeeysa beelaha wada dega Baay iyo Baydhabo, dowlad ayaa timid, caddaalad ayaa la heli ayaan is lahayn, runtii waan ka xumahay ayuu yiri in aan beel u hadlo laakiin waa nalaku khasbey, beel ayaa maamulkii dhan lagu taxay waxaa la yiri haddii iyaga laga qaado cid kalena la saaro mushkilad ayaa dhacaysa.
Ciidamada qaabka beeleysan isu habeeyey ayaa horjeegsadey in dadku bixiyaan canshuuraha waxayna kala direen goobihii canshuurta lagu kala qadan jirey.
Mid kamid ah Xildhibaanadii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku hanjabey in Baydhabo kahdka cagaaran la kala xiran doono, Ibraahim Xassan Buule ayaa yiri caddalad darradu waxay dhalineysaa in aa naguna ku dhawaaqno maamul kale oo gobolku yeesho.
Waxaa socda waan waan ay wadaan waxgaradka Baay & Bakool in aan beeluhu isku dhicin oo dagaal ka qarxo Baydhabo, kaas oo cidda ka faa’ideysanaysaa uu noqon doono qolo kale oo ka baxsan dhamaantood.
Afhayeenka Baarlamaanka oo ahaa sii haya xilka Madaxweynaha, markii Madaxweynuhu dalka ka maqnaa ayaa dhawaan maamul u magacaabey gobolka Baay iyo xaruntiisa Baydhabo, waxaa maamulkaas diidey maamulkii xilka laga qaadey, oo ku dooday in shacabku soo doorteen ayna xilka ku wareejinayaan qofkii shacabku soo doorto.
Tan iyo intii maamulka cusub loo magacaabey gobolka Baay waxaa soo badanayey nabadgelyo darrada halkaas ka taagan.
Prof.Maxamed Cismaan Jawaari ayaa hadda kus ugan dalka itoobiya waxaana la aaminsan yahay waxyaabaha ay ka wada hadlayaan in ay u horeyso, maadaama ciidamada ugu badan ee Itoobiya Soomaaliya ka jooga ay ku sugan yihiin Gobolada Baay & Bakool.